brinicle ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မော်နီကာဆန် | | ဆိုင်ကလုန်းများ
သင်သည်အန္တာတိကတိုက်ကြီးကဲ့သို့အအေးခန်းသို့သွားရန်အခွင့်အရေးရှိလျှင်၊ ရေထဲသို့ ၀ င်ဝံ့ပါကအလွန်သတိထားပါ။ သင်သည်ပင်လယ်ဆိုင်ကလုန်းကိုကျော်ပြီးကျော်ကြားလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုနာမည်ဖြင့်လူသိများသည် အကျဉ်းချုပ်သို့မဟုတ်သေမင်း၏လက်ရုံး။
ကမ္ဘာဂြိုဟ်တွင်အရာခပ်သိမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အမှန်မှာ၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီအထိ၎င်းသည်တည်ရှိသည်ကိုသိရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အချိန်ကုန်လွန်သည့်အချိန်၌ပထမဆုံးအကြိမ်ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါဘာလဲ ကောင်းပြီ၊ ဒီထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာတကယ်တော့ရေခဲစတိတ်ထိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ် (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်) နှင့်အနက် (၂၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အတွင်းရှိအပူချိန်ကွာခြားမှုကြောင့်အန္တာတိကရေမှာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ 1960 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ။ ထို့ကြောင့်အပူချိန်သုညဒသမအောက်တွင်ရှိသည့်ငန်ရေငန်စီးဆင်းမှုသည်ပိုမိုပူနွေးသောသမုဒ္ဒရာရေနှင့်ထိတွေ့မိသဖြင့်ရေခဲစတလီထရိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အစပိုင်းတွင်အောက်သို့ကြီးထွားလာနေသောအခေါင်းပေါက်ရေခဲပြွန်ကိုအလွန်သတိရစေသည်။ ၎င်းအတွင်း၌ရေရှိသည် အလွန်အမင်းအအေးမိ နှင့်၎င်းတွင်လမ်းကြောင်းများစုဆောင်းမိသောဆားမြင့်မားမှုရှိသည်။ ဤအဆင့်တွင်၎င်းသည်ပျက်စီးလွယ်သောဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နံရံများမှာပါးလွှာပြီး ဆက်၍ ကြီးထွားရန်ဆားကိုအစာကျွေးရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ရန်အခြေအနေများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည် -
ပြွန်ပတ်လည်ရှိရေအနည်းငယ်ဖြစ်သင့်သည် ဆားလျော့နည်း အတွင်း၌ရှိသောတ ဦး တည်းထက်။
အခြေအနေများမှန်ကန်ပါကသင်သည်အောက်ခြေကိုထိ။ တောင်ပေါ်သို့သွားနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၎င်းသည်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်သောအရာများကိုပြုလုပ်ပေးမည့်ရေခဲကွန်ယက်တစ်ခုမှထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြယ်များ၊ ပင်လယ်ရေမုန်းတီးမှုများ၊ ငါးများ၊ ကဏန်းများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေလမ်းခရီးရှိအရာအားလုံးကိုအေးခဲစေလိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင်ရိုးရိုးလေးပါ ပျောက်သွားလိမ့်မယ်.
ထို့အပြင် "လက်မောင်း" သည်အလွန်အေးလွန်း။ သိပ်သည်းသောကြောင့်တိုးတက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း၊ ပင်လယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါ၎င်း၏ပုံသဏ္mainာန်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အရွယ်အစားကြီးထွားလာခြင်းတို့ကြောင့်လေယာဉ်၏ဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အအေးဆားငန်ရေ။ ဤအလွှာသည်အပူကိုမကာကွယ်နိုင်အောင် ဆက်လက်၍ ရေခဲများထပ်မံကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆားကပိုခဲနေတဲ့အချက်ကိုလျော့ကျစေလို့ပဲ။ ထို့ကြောင့် brinicle သည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးဖြစ်နိုင်လျှင်အံ့သြစရာဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါ brinicle ၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ် ကန့်သတ်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိရေ၊ အတိမ်အနက်နှင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားရေခဲများ၏ကြီးထွားမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။
ဤဖွဲ့စည်းမှုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်၊ Antarctica ရှိ Razorback ကျွန်းရှိ Kathryn Jeffs နှင့်ဘီဘီစီအတွက် Hugh Miller နှင့် Doug Anderson တို့ကရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ပင်လယ်အပူချိန်မှာ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိသော်လည်းသူတို့သည်အဝတ်အစားများနှင့်အတူ ၀ င်ဝံ့ဝံ့ကြပြီးသူတို့၏သတ္တိကိုပါဝါမှရရှိသည်မှာသေချာသည်။ စံချိန် အထူးသဖြင့်အန္တာတိကတိုက်ကဲ့သို့သောအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သောကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးသဘာဝဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေသောမျက်နှာပြင်အောက်၌ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများ၊ ပင်လယ်ခြင်္သေ့များ၊ ပင်ဂွင်းငှက်များနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များသည်စားစရာတစ်ခုခုရှာဖွေရန်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းလုပ်သောကြောင့်ရေအေးရေယာဉ်များသည်ပင်လယ်ပြင်နှင့်ထိတွေ့မိလျှင်၎င်း၊ ကောင်းတယ်အရမ်းအေးတယ် ၎င်းသည်ပင်လယ်ဆိုင်ကလုန်းဟုခေါ်ဆိုရန်လုံလောက်သည်ပိုကောင်းတဲ့သေမင်း၏ brinicle သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်အမည်ဖြင့်လူသိများ။
သဘာဝတရားမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူစရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်အံ့သြစရာတစ်ခုထက်မကရှိနေသေးသည်။ လူသည်ဤကဲ့သို့သောပြပွဲကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ထပ်မံမြင်တွေ့ရမည်ကိုမသိရသေးပါ။ နောက်တဖန်အံ့ will လိမ့်မည်.
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? စိတ်ဝင်စားပါသလား အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းသည်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားပြီး၎င်းနှင့်တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုဆွဲယူသည်။ ဒါကြောင့်သင်တစ် ဦး ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့လျှင်, ပျော်မွေ့ ... ဒါပေမယ့်အကွာအဝေးကနေအမှု၌။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » ဆိုင်ကလုန်းများ » ပင်လယ်၏ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းသို့မဟုတ်သေမင်း၏လက်ချောင်း
မိုးလေဝသနှင့်နက္ခတ္တဗေဒနွေ ဦး အကြားခြားနားချက်